Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Nlaghachi TUI na Jamaica ga -abụ nnukwu onye na -agbanwe egwuregwu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
TUI laghachiri Jamaica
Onye Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, kwenyere na nlọghachi azụ nke TUI, ụlọ ọrụ kacha eme njem nlegharị anya n'ụwa, na Jamaica ga -abụ onye na -agbanwe egwuregwu maka mpaghara njem na -aga n'ihu.
A na -atụ anya na TUI ga -amalitegharị ụgbọ elu n'agwaetiti Jamaica n'ime ụbọchị ole na ole.
Nke a na -ewepụ enweghị ntụkwasị obi chere Jamaica ihu n'ahịa UK, nke bụ otu n'ime ahịa ahịa isi mmalite ya maka ndị njem.
Ụgbọ elu ahụ ga -ebubata ihe dị ka ụgbọ elu isii kwa izu, na -enye oche 1,800 ruo 2,000. Na 2019 TUI buuru ndị njem ụgbọ elu nde 11.8 n'ụwa niile.
Nkwuwapụta nke nloghachi TUI na -esochi Mkpebi gọọmentị UK bulie ndụmọdụ ya megide njem niile adịghị mkpa na Jamaica.
A na-atụ anya na TUI ga-amalitegharị ụgbọ elu n'agwaetiti ahụ n'ime ụbọchị ole na ole, mgbe ọ kwụsịtụrụ ha na Ọgọstụ n'ihi ndụmọdụ gọọmentị UK nyere ndị bi megide njem na-adịghị mkpa na agwaetiti ahụ n'ihi iyi egwu COVID-19, nke butere nnukwu nsogbu. njem nleta.
Minista Bartlett kọwara mkpebi TUI ịmaliteghachi ụgbọ elu na Jamaica dị ka "ozi ọma maka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke na-alaghachi azụ na ndapụta ụwa nke ọrịa COVID-19 kpatara." Ọ sịrị, "Nke a ewepụla enweghị mgbagwoju anya nke chere anyị ihu n'ahịa UK, nke bụ n'etiti nnukwu ahịa ahịa maka ndị njem."
Minista Bartlett kwupụtara na “nloghachi TUI ga -abụ onye na -agbanwe egwuregwu n'ihi na ọ ga -eme ka ndị ọbịa si UK na -aga n'ihu nke ọtụtụ akụrụngwa obodo na ndị mmekọ njem na -adabere. Yabụ, mmetụta akụ na ụba ga -adị mkpa ọ bụghị naanị maka njem nlegharị anya kamakwa akụnụba sara mbara. "
Ọ gbakwụnyere na “ụgbọ elu TUI ga -amaliteghachi na ngwụcha izu na -abịa, ụlọ ọrụ ụgbọ elu na -ebute ihe dị ka ụgbọ elu isii kwa izu, na -enye oche 1,800 ruo 2,000. Anyị na-elele ihe dị ka puku ụlọ iri abalị na họtel nwere nnukwu ohere maka ebe obibi na mpaghara ndị ọzọ, ọkachasị mmasị na njem, nke pụtara ọrụ maka ọtụtụ ndị ọrụ yana uru akụ na ụba maka ezinụlọ ha. ”
Minista Bartlett kwuru, sị: “Ugbu a TUI alọghachila n'usoro, Njem nleta Jamaica mgbake nọ n'ụzọ dị mma iji nwetaghachi ala furu efu ma na-eme ka anyị bịarukwuo nso ịlaghachi na ndekọ ndekọ ndekọ COVID. ”
Na 2019 TUI buuru ndị njem ụgbọ elu nde 11.8 n'ụwa niile. Ọ bụ otu ndị njem nlegharị anya n'ụwa. Pọtụfoliyo sara mbara agbakọtara n'okpuru nchedo otu a nwere ndị ọrụ njem nlegharị anya siri ike, ihe dị ka ụlọ ọrụ njem 1,600 na ọnụ ụzọ ntanetị, ụgbọ elu ise nwere ihe dị ka ụgbọ elu 150, ihe dị ka ụlọ nkwari akụ 400, ihe dị ka ndị njem ụgbọ mmiri 15 na ọtụtụ ụlọ ọrụ na -abata na ebe ezumike niile gafee ụwa niile. . Ọ na -ekpuchi agbụ ọnụ ahịa njem niile n'okpuru otu ụlọ.